အရေးကြီးသော အောင်မြင်မှု၏ အဓိပ္ပါယ် – Gentleman Magazine
အရေးကြီးသော အောင်မြင်မှု၏ အဓိပ္ပါယ်
06/02/2016 23/05/2017 Admin
အရေးကွီးသော အောငျမွငျမှု၏ အဓိပ်ပါယျ
လူတိုင်းမှာ ဘ၀အောင်မြင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး မတူကွဲပြားတဲ့ အယူအဆတွေရှိတတ်ကြပါတယ်။ အောင်မြင်မှုကို ဘယ်လိုပဲ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုသည်ဖြစ်စေ အောင်မြင်မှုကို အဆုံးအဖြတ်ပေးဖို့ကတော့ နည်းလမ်းတစ်ခုပဲ ရှိပါတယ်။ ဒီနည်းလမ်းကတော့ မေးခွန်းတစ်ခုကို ဖြေကြည့်ဖိုပါပဲ။
ငါ ဘယ်လောက် ပျော်ရွှင်ရသလဲ ?
ထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်လာတဲ့ စွန့်ဦးလုပ်ငန်းရှင်အများစုဟာ သူတို့လုပ်ငန်းအောင်မြင်ဖို့အတွက် နာရီပေါင်းများစွာ အလုပ်လုပ်တတ်ကြပြီး အာရုံစူးစိုက်မှုလည်း သူမတူအောင် ရှိတတ်ကြပါတယ်။ ဒီလို လုပ်ဆောင်ရင်းနဲ့ သူတို့ရဲ့ လူမှုရေးနဲ့ မိသားစုဘ၀မှာ ထိခိုက်မှုတွေ ရှိလာတတ်ပါတယ်။
ဒီလိုထိခိုက်မှုက မျှတမှုရှိလား၊ မရှိဘူးလားဆိုတာက အဓိကမကျပါဘူး။ လုပ်ငန်းအတွက်ကြိုးစားနေချိန်မှာ လူမှုရေးနဲ့ မိသားစုရေးမှာ ထိခိုက်မှုတွေက ရှောင်လွှဲလို့မရနိုင်ပါဘူး။ ငွေကြေးအမြောက်အများရှာဖွေနိုင်ပေမယ့် ပျော်ရွှင်မှုမရှိဘူးဆိုရင် နည်းလမ်းမကျသေးပါဘူး။ လုပ်ငန်းအောင်မြင်မှုအတွက် လူမှုဘ၀မှာပေးဆပ်မှုတွေ များနေတဲ့သဘောပဲဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တမ်းတော့ ငွေရှာဖို့ထက် ပိုပြီးအရေးကြီးတာတွေ အများကြီးရှိနေပါသေးတယ်။
နေ့စဉ်နေ့တိုင်း ငွေကြေးချမ်းသာပြည့်စုံတဲ့ ဘ၀တစ်ခုကိုရရှိဖို့ ကြိုးစားရင်း မပျော်ရွှင်ရဘူးဆိုရင် သင်လုပ်ဆောင်ဖို့ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့အရာဟာ သင့်ကို အမှန်တကယ် ချမ်းသာအောင် လုပ်မပေးနိုင်သေးပါဘူး။ သင်လိုချင်တဲ့အရာတွေကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖို့ ကြိုးစားကြည့်ပါ။ စီးပွားရေးအောင်မြင်မှု၊ မိသားစု၊ မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်း ပြီးတော့ ဘ၀မှာဘယ်ကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ် တသီးတခြားဆီခွဲခြားလို့ မရနိုင်တာကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ အားလုံးက သာတူညီမျှအရေးကြီးတဲ့အတွက် တစ်ခုခုကို အာရုံစိုက်လိုက်ရင် အခြားတစ်ခုမှာ အာရုံစူးစိုက်မှုလျော့နည်းသွားမှာ သေချာပါတယ်။
ငွေကြေးများများရှာချင်ရင် တစ်ခုခုတော့ ပြန်လည်ပေးဆပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုပါပဲ။ မိသားစုအတွက် အချိန်ပေးချင်တာ၊ အခြားလူတွေကို ကူညီချင်တာ၊ ၀ါသနာပါတာတစ်ခုခုကို လုပ်ဆောင်တာ၊ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် လုပ်ချင်တာတစ်ခုအတွက် အခြားတစ်ခုကို ပြန်ပေးဆပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဘာက သင့်ကို လှုံ့ဆော်တွန်းအားပေးနိုင်မလဲ။ သင်ကိုယ်တိုင်နဲ့ သင့်မိသားစုအတွက် ဘာကိုရယူ ပိုင်ဆိုင်ချင်တာလဲ။ ဘာကို တန်ဖိုးအထားဆုံးလဲ သေချာစဉ်းစားပါ။ ပြီးတော့မှ လုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင် သင့်ကို ပျော်ရွှင်စေနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်တော့ လုပ်သာလုပ်နေရတယ်၊ ပျော်ရွှင်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။
ရိုးရှင်းတယ်လို့ထင်ပါသလား။ သင့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လူတစ်ယောက်ယောက်ကို သူရွေးချယ်ထားတဲ့ အလုပ်အကိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ရလဒ်တွေကိုကျေနပ်မှုရှိမရှိမေးကြည့်ပါ။ ဥပမာပြောရရင် ကျွန်တော်နဲ့ သိတဲ့ ကျောင်းဆရာမတစ်ဦးကို မေးကြည့်ဖူးပါတယ်။ သူမက ရတဲ့လစာနည်းတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမြဲတမ်း ညည်းညူတတ်သူဖြစ်တဲ့အတွက် အလုပ်ပြောင်းဖို့ အကြံပေးကြည့်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူမက စာသင်ရတာကို နှစ်သက်လို့ အလုပ်မပြောင်းနိုင်ဘူးလို့ပဲ ဖြေပါတယ်။ ဒီမှာတင်ပဲ လွဲနေပါပြီ။ စာသင်ရတာကို တကယ်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင် လစာနည်းတာကို လက်ခံနိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီတော့ သင်ပျော်ရွှင်နေပါသလား ? ?
အောင်မြင်မှုရဲ့ အဓိပ္ပါယ်က အရေးကြီးပါတယ်။ သင်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အဓိပ္ပါယ်က ပိုပြီးအရေးကြီးပါတယ်။ ဒါတွေထက် အရေးကြီးတာက သင့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ လူမှုရေးအလုပ်တွေလုပ်ဆောင်ပြီး အများကို ကူညီရတာက သင့်အောင်မြင်မှုရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ဖြစ်မယ်ဆိုရင် အဆင်ပြေပြောလုပ်ဆောင်နိုင်နေပေမယ့် ချမ်းသာလာမှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီအချက်ကိုလက်ခံနိုင်မယ်ဆိုရင် သင်ပျော်ရွှင်ရမှာသေချာပါတယ်။
သင်ပျော်နိုင်ပြီလား ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်မေးပါ။ သင်ပျော်နိုင်ရင် သင်အောင်မြင်နေပါပြီ။ သင်ပိုပြီးပျော်ရွှင်လေလေ၊ ပိုပြီးအောင်မြင်လာလေပါပဲ။ အကယ်၍ မပျော်ဘူးဆိုရင်တော့ အပြောင်းအလဲလုပ်ဖို့ အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
လူတိုငျးမှာ ဘ၀အောငျမွငျမှုနဲ့ပတျသကျပွီး မတူကှဲပွားတဲ့ အယူအဆတှရှေိတတျကွပါတယျ။ အောငျမွငျမှုကို ဘယျလိုပဲ အဓိပ်ပါယျဖှငျ့ဆိုသညျဖွဈစေ အောငျမွငျမှုကို အဆုံးအဖွတျပေးဖို့ကတော့ နညျးလမျးတဈခုပဲ ရှိပါတယျ။ ဒီနညျးလမျးကတော့ မေးခှနျးတဈခုကို ဖွကွေညျ့ဖိုပါပဲ။
ငါ ဘယျလောကျ ပြျောရှငျရသလဲ ?
ထူးထူးခွားခွားအောငျမွငျလာတဲ့ စှနျ့ဦးလုပျငနျးရှငျအမြားစုဟာ သူတို့လုပျငနျးအောငျမွငျဖို့အတှကျ နာရီပေါငျးမြားစှာ အလုပျလုပျတတျကွပွီး အာရုံစူးစိုကျမှုလညျး သူမတူအောငျ ရှိတတျကွပါတယျ။ ဒီလို လုပျဆောငျရငျးနဲ့ သူတို့ရဲ့ လူမှုရေးနဲ့ မိသားစုဘဝမှာ ထိခိုကျမှုတှေ ရှိလာတတျပါတယျ။
ဒီလိုထိခိုကျမှုက မြှတမှုရှိလား၊ မရှိဘူးလားဆိုတာက အဓိကမကပြါဘူး။ လုပျငနျးအတှကျကွိုးစားနခြေိနျမှာ လူမှုရေးနဲ့ မိသားစုရေးမှာ ထိခိုကျမှုတှကေ ရှောငျလှဲလို့မရနိုငျပါဘူး။ ငှကွေေးအမွောကျအမြားရှာဖှနေိုငျပမေယျ့ ပြျောရှငျမှုမရှိဘူးဆိုရငျ နညျးလမျးမကသြေးပါဘူး။ လုပျငနျးအောငျမွငျမှုအတှကျ လူမှုဘဝမှာပေးဆပျမှုတှေ မြားနတေဲ့သဘောပဲဖွဈပါတယျ။ တကယျတမျးတော့ ငှရှောဖို့ထကျ ပိုပွီးအရေးကွီးတာတှေ အမြားကွီးရှိနပေါသေးတယျ။
နစေ့ဉျနတေို့ငျး ငှကွေေးခမျြးသာပွညျ့စုံတဲ့ ဘဝတဈခုကိုရရှိဖို့ ကွိုးစားရငျး မပြျောရှငျရဘူးဆိုရငျ သငျလုပျဆောငျဖို့ရှေးခယျြခဲ့တဲ့အရာဟာ သငျ့ကို အမှနျတကယျ ခမျြးသာအောငျ လုပျမပေးနိုငျသေးပါဘူး။ သငျလိုခငျြတဲ့အရာတှကေို ခှဲခွမျးစိတျဖွာဖို့ ကွိုးစားကွညျ့ပါ။ စီးပှားရေးအောငျမွငျမှု၊ မိသားစု၊ မိတျဆှအေပေါငျးအသငျး ပွီးတော့ ဘဝမှာဘယျကိစ်စပဲဖွဈဖွဈ တသီးတခွားဆီခှဲခွားလို့ မရနိုငျတာကို တှရေ့ပါလိမျ့မယျ။ အားလုံးက သာတူညီမြှအရေးကွီးတဲ့အတှကျ တဈခုခုကို အာရုံစိုကျလိုကျရငျ အခွားတဈခုမှာ အာရုံစူးစိုကျမှုလြော့နညျးသှားမှာ သခြောပါတယျ။
ငှကွေေးမြားမြားရှာခငျြရငျ တဈခုခုတော့ ပွနျလညျပေးဆပျရမှာဖွဈပါတယျ။ ဒီလိုပါပဲ။ မိသားစုအတှကျ အခြိနျပေးခငျြတာ၊ အခွားလူတှကေို ကူညီခငျြတာ၊ ဝါသနာပါတာတဈခုခုကို လုပျဆောငျတာ၊ ဘာပဲဖွဈဖွဈ လုပျခငျြတာတဈခုအတှကျ အခွားတဈခုကို ပွနျပေးဆပျရမှာဖွဈပါတယျ။
ဘာက သငျ့ကို လှုံ့ဆျောတှနျးအားပေးနိုငျမလဲ။ သငျကိုယျတိုငျနဲ့ သငျ့မိသားစုအတှကျ ဘာကိုရယူ ပိုငျဆိုငျခငျြတာလဲ။ ဘာကို တနျဖိုးအထားဆုံးလဲ သခြောစဉျးစားပါ။ ပွီးတော့မှ လုပျဆောငျမယျဆိုရငျ သငျ့ကို ပြျောရှငျစနေိုငျမှာဖွဈပါတယျ။ ဒီလိုမှမဟုတျရငျတော့ လုပျသာလုပျနရေတယျ၊ ပြျောရှငျနိုငျမှာမဟုတျပါဘူး။
ရိုးရှငျးတယျလို့ထငျပါသလား။ သငျ့ပတျဝနျးကငျြမှာရှိတဲ့လူတဈယောကျယောကျကို သူရှေးခယျြထားတဲ့ အလုပျအကိုငျနဲ့ပတျသကျပွီး ရလဒျတှကေိုကနြေပျမှုရှိမရှိမေးကွညျ့ပါ။ ဥပမာပွောရရငျ ကြှနျတျောနဲ့ သိတဲ့ ကြောငျးဆရာမတဈဦးကို မေးကွညျ့ဖူးပါတယျ။ သူမက ရတဲ့လစာနညျးတာနဲ့ပတျသကျပွီးအမွဲတမျး ညညျးညူတတျသူဖွဈတဲ့အတှကျ အလုပျပွောငျးဖို့ အကွံပေးကွညျ့ပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ သူမက စာသငျရတာကို နှဈသကျလို့ အလုပျမပွောငျးနိုငျဘူးလို့ပဲ ဖွပေါတယျ။ ဒီမှာတငျပဲ လှဲနပေါပွီ။ စာသငျရတာကို တကယျနှဈသကျတယျဆိုရငျ လစာနညျးတာကို လကျခံနိုငျရမှာဖွဈပါတယျ။
ဒီတော့ သငျပြျောရှငျနပေါသလား ? ?
အောငျမွငျမှုရဲ့ အဓိပ်ပါယျက အရေးကွီးပါတယျ။ သငျရဲ့ကိုယျပိုငျအဓိပ်ပါယျက ပိုပွီးအရေးကွီးပါတယျ။ ဒါတှထေကျ အရေးကွီးတာက သငျ့ရဲ့ရညျရှယျခကျြဖွဈပါတယျ။ လူမှုရေးအလုပျတှလေုပျဆောငျပွီး အမြားကို ကူညီရတာက သငျ့အောငျမွငျမှုရဲ့ အဓိပ်ပါယျဖွဈမယျဆိုရငျ အဆငျပွပွေောလုပျဆောငျနိုငျနပေမေယျ့ ခမျြးသာလာမှာတော့မဟုတျပါဘူး။ ဒီအခကျြကိုလကျခံနိုငျမယျဆိုရငျ သငျပြျောရှငျရမှာသခြောပါတယျ။
သငျပြျောနိုငျပွီလား ကိုယျ့ကိုယျကို ပွနျမေးပါ။ သငျပြျောနိုငျရငျ သငျအောငျမွငျနပေါပွီ။ သငျပိုပွီးပြျောရှငျလလေေ၊ ပိုပွီးအောငျမွငျလာလပေါပဲ။ အကယျ၍ မပြျောဘူးဆိုရငျတော့ အပွောငျးအလဲလုပျဖို့ အခြိနျပဲဖွဈပါတယျ။
Previous: သင့်ကောင်မလေးက သင့်ကိုအသုံးချနေတာကို သိနိုင်ဖို့
Next: အလုပ်ကြောင့် အိမ်ထောင်ရေးကို မထိခိုက်စေဖို့ နည်းလမ်း (၅)ခု